” ယင်း နေ့ “ | PoemsCorner
” ယင်း နေ့ “
ရွေ့လျားနေသောတိမ်တိုက်တို့ဖန်ဆင်းသည့် ပူပြင်းသောနွေရာသီတစ်ရက်တွင်ဖြစ်သည်။ တစ်ခုသောရေကန်ကြီးနံဘေး တည်ငြိမ်နေသောလှေကားထစ်များပေါ်တွင် ကျွန်တော်ထိုင်နေမိသည်။ ထိုလှေကားထစ်များနှင့်မလှမ်းမကမ်း လဲလျောင်းနေသော လမ်းမကြီးပေါ်တွင် လူအများဥဒဟိုသွားလာနေသည်။ သူတို့သည် ထိုင်နေသောကျွန်တော့်ကို သတိပြုမိပုံမပေါ်။ ကျွန်တော်လည်း ၎င်းတို့ကိုစိတ်ဝင်စားမှုအလျင်းမရှိ။ နေပူပူအောက်တွင် လာရင်းကိစ္စကိုသာ အပြန်ပြန်အလှန်လှန် တွေးတောနေမိလေသည်။
ကျွန်တော့်လက်ထဲတွင်အရာနှစ်ခုရှိသည်။ တစ်ခုမှာ သူမ၏ဓာတ်ပုံဖြစ်ပြီး တစ်ခုမှာစာအိတ်တစ်အိတ်ဖြစ်သည်။ ထိုအခိုက် အသိတစ်ခုခေါင်းထဲရောက်လာကာ ကျွန်တော့်စိတ်များနောက်ကျိသွားသည်။ နောက်ကျိနေသောကျွန်တော့်စိတ်ကိုအနည်ထိုင်စေရန် ကြည်လင်နေသော ရေကန်ကိုကြည့်မိသည်။ ကန်ရေသည် ကြည်လင်လွန်းလှသဖြင့် ကူးခတ်နေသောငါးများကိုပါ မြင်ရလေသည်။ ရေထဲတွင်ငါးလည်းရှိသည်။ တိမ်တိုက်တွေလည်းရှိသည်။ ကောင်းကင်တစ်ခု ရေကန်ထဲပြုတ်ကျနေပုံပေါ်သည်။ ရေကန်တစ်ခုကြည်လင်နေဖို့ ကောင်းကင်တစ်ခုလိုမည်ဟုထင်သည်။ ကျွန်တော်တိတ်တိတ်လေးကျိတ်ပြုံးမိသည်။ ထိုအကြောင်းကို နယူတန်ပင်သိသွားဟန်မတူ။ ကျွန်တော့်ခေါင်းထဲကိုလည်း ကောင်းကင်တစ်ခုလောက်ထည့်ထားရဦးမည်။ ကန်ရေကိုကြည့်နေရင်း ကျွန်တော့်စိတ် တဖြည်းဖြည်းအနည်ထိုင်စပြုလာသည်။ ကန်ရေပေါ်ဖြတ်တိုက်သောလေထဲမှ သန့်ရှင်းသောအောက်စီဂျင်ကြောင့်ဖြစ်ဟန်တူသည်။ သို့သော်နှလုံးသားသည် အစိုင်အခဲဖြစ်နေသေးသည်။ ဦးနှောက်တွင် အောက်စီတိုစင်ဟော်မုန်းမထွက်သည်မှာကြာနေပြီ။ ကျွန်တော့်ဘေးတွင်လူမရှိ။ သူမလည်းမရှိ။ သို့သော်သူမနှင့်တူသောအရာတော့ရှိသည်။ အမှန်တရားတစ်ခုကိုလက်သင့်ခံဖို့ရာ ယုတ္တိရှိရန်နှင့် ခိုင်လုံသောအကြောင်းပြချက် များစွာလိုသည်။ တစ်စုံတစ်ယောက်အတွက်မှန်ကန်သောအဖြေသည် ကျန်တစ်စုံတစ်ယောက်အတွက် အချိန်မရွေး ဆန့်ကျင်ဘက်ဖြစ်သွားနိုင်သည်။ ထို့ကြောင့်ကျွန်တော့်လက်ထဲက သူမကိုကြည့်မိသည်။ သူမပြုံး၍ပြန်ကြည့်သည်။ ကျွန်တော်အနည်းငယ်တော့ စိတ်လှုပ်ရှားသွားမိသည်။ သူမ၏အပြုံးသည် ကဗျာဆန်လွန်းလှသည်။ ထိုအပြုံးဖြင့်ပင် ကျွန်ုပ်အားဖမ်းစားခဲ့ခြင်းဖြစ်ဟန်တူသည်။ သူမမျက်လုံးများသည် ကြည်လင်လွန်းလှသည်။ ထို့ကြောင့်ကြည်လင်နေသော ကန်ရေပြင်ကို ကျွန်တော်လက်ချောင်းဖြင့်ထိလိုက်မိသည်။ ထိမိသောနေရာမှာ လှိုင်းကလေးများလူးလွန့်သွားချိန် ကျွန်တော့်အား ပြုံးပြလျက်ရှိသော သူမ၏မျက်နှာလေး ညှိုးရော်သွားသည်။ ကျွန်တော်မရည်ရွယ်ခဲ့မိပါ။ ကျွန်တော်အဲလိုလူမျိုးမဟုတ်ပါ။ သို့သော် ယခု သူမ မပြုံးတော့သည်မှာ အမှန်ဖြစ်သည်။
ဓာတ်ပုံ၏အောက်တွင်စာအိတ်တစ်အိတ်ရှိသည်။ ထိုစာအိတ်ထဲတွင် ရွှေရောင်တောက်တောက်နှင့် နှာခေါင်း ဓာတ်မတည့်သူတို့မကြိုက်သော နာမည်ကြီးရေမွှေးဆွတ်ထားသော စာတစ်စောင်ရှိသည်။ ထိုစာကိုဆွဲထုတ်ခိုက် မဲ့ပြုံးတစ်ခု ရေထဲထွက်ကျသွားသည်။ အပြုံးတွင် အမာရွတ်တစ်ခုပါသည်။ ပြန်ဆယ်ဖို့ ကျွန်တော်မစဉ်းစားနိုင်ပါ။ ကျွန်တော့်လက်များတုန်ယင်နေသည်။ နှုတ်ခမ်းများတုန်ယင်နေသည်။ ထိုင်နေသောလူတစ်ယောက်ထက် အရက်ဖြတ်ခါစ လူတစ်ယောက်နှင့်ပိုတူနေသည်။ တိမ်တိုက်များ ပို၍ခပ်မြန်မြန်ရွေ့လျားနေသည်ဟုထင်သည်။ လူတွေလမ်းမြန်မြန်လျှောက်နေသည်ဟုထင်သည်။ ထိုစဉ် လေပူတစ်ချက်ပြင်းပြင်းတိုက်လိုက်သဖြင့် လက်ထဲမှစာကိုလွတ်မသွားအောင် တင်းတင်းဆုပ်လိုက်ရသည်။ တကယ်တော့ ဒီလိုစာမျိုးအတွက် ဒီလောက်အားစိုက်ထုတ်ရန်မလိုပါ။ သို့သော် အရှုံးကြီးရှုံးခဲ့ရသော လူတစ်ယောက်၏ လက်ကျန်သိက္ခာအတွက် ဤစာကို ဖတ်ကိုဖတ်ရပေမည်။ ကျွန်တော့်ခန္ဓာကိုယ်ထဲတွင် သွေးနီဥများ စတင်လျော့ပါးစပြုနေပြီဖြစ်သည်။
စာထဲတွင်လူနှစ်ယောက်၏နာမည်များပါရှိသည်။ သဘာဝတရားအရ တစ်ယောက်သည်အထီးဖြစ်၍ ကျန်တစ်ယောက်သည်အမဖြစ်သည်။ အထီးနာမည်ကိုမရင်းနှီးသော်လည်း အမနာမည်ကိုကား အရိုးစွဲအောင်သိသည်။ သို့သော် မသိချင်ယောင်ဆောင်ပြီး စာကိုဆက်ဖတ်လိုက်လေသည်။ ဘွဲ့အမည်ဟုယူဆရသော၊ အေဘီစီဒီဖြင့်ရေးထားသောစာလုံးများပါ သည်။ လူတစ်ယောက်ချင်းစီကိုအမျိုးစပ်ထားသည့် ဆွေမျိုးနာမည်များပါသော စာပုဒ်နှစ်ပိုဒ်ပါသည်။ နေ့စွဲတစ်ခုပါသည်။
နေရာတစ်ခုပါသည်။ အချိန်တစ်ခုပါသည်။ စာသည် ဖတ်သူကိုဆွဲဆောင်နိုင်သည်။ လူကြီးများပင်စိတ်မထိန်းနိုင်လျှင် မွှေးကြည့်မိကြသည်။ လူအများက မင်္ဂလာရှိသည်ဟုယူဆထားသော လောကတွင်
မထူးဆန်းသည့်အကြောင်းအရာကို တခမ်းတနားဖော်ပြထားလေသည်။ ဂုဏ်ပကာသနများ ထုံမွှန်းနေသည်။ ဗုဒ္ဓဟောကြားသော အနိစ္စ၊ ဒုက္ခ၊ သင်္ခါရတရားများ ကိုလျစ်လျု ရှုသည်။ ငွေသည် လူ့လောက၏ နတ်ဘုရားတစ်ပါးဟု မကြေငြာရုံတစ်မယ်ဖြစ်သည်။ ထိုသို့အတွေးခေါင်ပြီးသော် စာကိုဆက်ဖတ်သည်။ စာတွင်ပါသော နေ့စွဲကိုမြင်လိုက်သည်။ တိုက်ဆိုင်လွန်းပေစွ။ ရက်၊ လ၊ခုနှစ်သက္ကရာဇ်မှအစအားလုံး ယနေ့နေ့စွဲပင်ဖြစ်သည်။ ကျွန်တော့်လက်တွင်အမြဲပတ်ထားလေ့ရှိသော မှန်ကွဲရာများပါသည့် နာရီကိုကြည့်မိသည်။ စာထဲမှာပါသောအချိန်နှင့် အတူတူပင်ဖြစ်သည်။ နေရာတစ်ခုအတွက်သာ ကျွန်တော်စိတ်သက်သာရာရသည်။ ကျွန်တော်ယခုထိုင်နေသောနေရာသည် လူတန်းစားမရွေးထိုင်နိုင်သောနေရာဖြစ်၍ စာထဲမှနေရာသည် ငွေခင်း၍နင်းပါမှ
လျှောက်နိုင်သောနေရာဖြစ်သည်။ ထိုအခိုက် သူမကိုသတိရမိသည်။ အတိတ်၏ပျော်စရာများ၊ အတိတ်၏အမှတ်တရများ၊ အတိတ်ထဲရှိလူများ(၀ါ)အတိတ်ထဲတွင် နေထိုင်ခဲ့သောနေ့စွဲများကို သူမသတိရလိမ့်မည်မဟုတ်။ သူမသည် လှပလွန်းလှသော ပိုးဖဲတို့ဖြင့်ချုပ်ထားသော သတို့သမီးဝတ်စုံကိုကြွရွစွာဝတ်၊အဖိုးထိုက်တန်လှသော စိန်ရွှေရတနာတို့ကိုဆင်မြန်းကာ ကတ္တီပါကောဇာပေါ်နင်းလျှောက်ဖို့အတွက်စိတ်အားထက်သန်နေပေလိမ့်မည်။ ‘ရက်စက်လိုက်တာ ပိတောက်ရယ်’ ဟု တီးတိုးရေရွတ်မိသည်။ ထိုစဉ်ကောင်းကင်ကြီး ရုတ်တရက်အရောင်ပြောင်းသွားသည်။ တိမ်တိုက်များ ပို၍နိမ့်ဆင်းလာသလိုထင်ရသည်။ နှလုံးသားသည်အရည်ပျော်ပြီး မျက်လုံးအိမ်များဆီသို့ဆောင့်တက်လာသည်။ ကန်ရေသည်ပြည့်ပြီးဖြစ်ရာ ရေထက်ဖြည့်စရာမလိုမှန်းကျွန်တော်သိသည်။ ခြောက်ကပ်နေသော လည်ချောင်းထဲတွင် ဆို့နင့်လျက်ရှိသာ နာကျည်းချက်တစ်ခုနှင့် ပြောမထွက်နိုင်ခဲ့သောစကားပေါင်း ထောင်သောင်းမကရှိနေသည်။ သူမအတွက်မင်္ဂလာလက်ဖွဲ့သည် ကန်ရေစပ်တွင်ချွတ်ခဲ့သော ဖိနပ်တစ်ရံဖြစ်ကြောင်းကိုတော့ စာ၏ကျောဘက် လွတ်နေသောနေရာတွင် ရေးရပေဦးမည်။ ကျွန်တော်မြတ်နိုးလှစွာသော သူမ၏အပြုံးပါသည့်ဓာတ်ပုံကိုတော့ ကျွန်တော်နောက်ဘ၀အထိ ယူသွားမည်ဟုဆုံးဖြတ်ထားသည်။ တကယ်တမ်းပြောရပါလျှင်အမှန်တရားသည် လူတိုင်းကိုမပျော်ရွှင်စေနိုင်သကဲ့သို့ ကြီးမားစွာပေးဆပ်ခဲ့ရသောလူတစ်ယောက်၏အချစ်စစ်အတွက် ထိုသူသည် တရားမျှတစွာဆုံးဖြတ်ခြင်း၏ရလဒ်ကို ခံစားရချင်မှခံစားရပေမည်။ ကျွန်တော် ဒဿ နများမရွတ်ချင်ပါ။ ဒဿ နများနှင့် လည်း အံမ၀င်ခဲ့ပါ။ ကန်ရေပြင်လည်းမသိခဲ့ပါ။ နောက်ဆုံးကျွန်တော့်တွင် ပိုင်ဆိုင်သမျှဆို၍နှစ်ခုသာလျှင်ရှိတော့သည်။ တစ်ခုသည် သူမ၏ဓာတ်ပုံဖြစ်၍ ကျန်တစ်ခုသည်သူမ မလိုချင်တော့၍စွန့်ပစ်ခဲ့သော ကျွန်တော့်နှလုံးသားအခွံတစ်ခုသာလျှင်ဖြစ်တော့သည်. . . . .
In: ဝတ္ထု Posted By: Lynn Eain Thin Date: Jan 16, 2014
Leave comment No comment & 291 views